Your Qanacsanaanta Ma Our Honor ugu sareeya
4 * laayeen daluugta 8ft Automatic miinshaar
Up dhululubada Cold Press Machine
15 lakabyo Hot Press Machine
Waxaan diyaar u nahay dhergi Shuruudaha Your
Ka dhig Faith, March Forward -Celebrat ...
On May 14, 2018, si ay ugu dabaal-guuradii llth ee abuuritaanka Shandong Senmao Makiinado Co., Ltd, our guddoomiyaha, Mr. Dexue Ma, abaabulan dalxiiska ee Buur Tai. Waxa kale oo ay ahayd coll shirkadda ee sanadlaha ah ...
[Raridda] Qalabka ka Senmao Mach ...
Waa maanta maalin mashquul. Diyaarinta ku shixnad: 3sets gogoshana xabagta, kor 2sets miiska; qarkiisa automatic arkay; Mashiinka qabow jaraa'id, mashiinka jaraa'id kulul iyo wixii la mid ah. Shan weelasha lagu keeni doonaa. Shandong Senmao Ma ...
[New Glue gogoshana] Senmao Makiinado Co., ...
Recently, Shandong Senmao Makiinado cilmi-baaris iyo in la horumariyo chrome loola dhaqmo gogoshana ah xabagta rullaluistemadka cusub. dhexroor waa 405mm. Waxay leedahay rullaluistemadka steel deegaanka dabiiciga ah. dhexroor waa 200mm, miisaanka waa 1.8T ...